Akụkọ - Resveratrol
Resveratrol bụ polyphenolic antitoxin dị na ụdị osisi dị iche iche, gụnyere ahụekere, mkpụrụ osisi, na mkpụrụ vaịn, nke a na-ahụkarị na mgbọrọgwụ nke polygonum cuspidatum. Ejiwo Resveratrol na-agwọ mbufụt ke Asia ruo ọtụtụ narị afọ. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, e kwuwo na uru mmanya mmanya na-acha ọbara ọbara dị maka ịdị na mkpụrụ vaịn. Mmụọ nsọ sitere na ihe omume akpọrọ French Paradox.
French Paradox bu nke mbu onye dibia nke Irish aha ya bu Samuel Blair choputara na akwukwo akwukwo nke edeputara na 1819. Ndi French huru nri n'anya, rie nri di otutu kalori na cholesterol, ma nwee nsogbu oria obi karia ka ha na asusu bekee. ogbo. Ya mere gịnị kpatara nke a? Dabere na nyocha, ndị obodo na-ejikarị mmanya tannin bara ụba eri nri iji soro nri ahụ. Mmanya na-acha ọbara ọbara nwere resveratrol, nke na-egbochi mkpụkọ ọbara, na-ebelata mbufụt, na-akwalite nsị nke arịa ọbara na-egbochi uto nje.
Achọpụtara Resveratrol na 1924 maka oge mbụ na nyocha ihe ọmụmụ. Ndị Japan hụrụ resveratrol na mgbọrọgwụ osisi na 1940. Na 1976, ndị Britain chọpụtakwara resveratrol na mmanya, ọ nwere ike iru 5-10mg / kg na nnukwu mmanya mmanya na-acha ọbara ọbara. Enwere ike ịchọta Resveratrol na mmanya, n'ihi na skins nke mkpụrụ vaịn a na-eji eme mmanya mmanya nwere resveratrol. N'ime usoro ịme mmanya na usoro ọrụ aka ọdịnala, resveratrol na-abanye n'usoro mmepụta mmanya mmanya na mkpụrụ vaịn, mechara jiri nwayọọ nwayọọ gbazee yana ịhapụ mmanya na mmanya. Na 1980s, ndị mmadụ jiri nwayọ chọpụta na ịdị adị nke resveratrol na osisi ndị ọzọ, dịka mkpụrụ cassia, polygonum cuspidatum, ahụekere, mulberry na osisi ndị ọzọ.
Ihe omumu nke botanist egosiwo na resveratrol nke oma bu udiri antitoxin nke osisi kpuchitere ma obu nsogbu ma obu nbuso agha. Nchịkọta nke resveratrol na-abawanye ngwa ngwa mgbe ekpughere radiesị ultraviolet, mmebi igwe na ọrịa fungal, ya mere a na-akpọ ya ọgwụ nje. Resveratrol nwere ike inyere osisi aka ịlụ ọgụ megide nrụgide ndị dị na mpụga dịka trauma, nje bacteria, ọrịa na radieshon ultraviolet, ya mere, ọ bụghị oke ịkpọ ya onye na-elekọta osisi.
Resveratrol egosila na ọ nwere antioxidant, anti-free radical, mgbochi tumo, igbochi obi na mmetụta ndị ọzọ.
1.Antioxidant, anti-free radical effect- Resveratrol bụ antioxidant sitere n'okike, ọrụ kachasị mkpa bụ iwepụ ma ọ bụ gbochie ọgbọ nke free radicals, na-egbochi lipid peroxidation, na ịhazi ọrụ nke enzymes metụtara antioxidant.
2.Anti-tumor effect- Mmetụta mgbochi nke resveratrol gosipụtara na ọ nwere ike igbochi mbido, nkwalite na mmepe nke akpụ. Ọ nwere ike imegide ọrịa kansa, ọrịa kansa, ọrịa imeju, ọrịa leukemia na mkpụrụ ndụ tumo ndị ọzọ n'ọtụtụ dịgasị iche site na usoro dị iche iche.
3.Cardiovascular protection - Resveratrol na-achịkwa ọkwa cholesterol ọbara ma na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa obi site na ịjikọta ndị na-anabata etrogen na ahụ. Ọzọkwa, resveratrol nwekwara mmetụta agglutination na-egbochi platelet, nke nwere ike igbochi platelet site na ikpokọta iji mepụta mkpụkọ ọbara na-arapara na mgbidi arịa, si otú a na-egbochi ma belata ihe omume na mmepe nke ọrịa obi.
4.Estrogen mmetụta- Resveratrol yiri nke estrogen diethylstilbestrol, nke na-ejikọta ndị na-anabata estrogen ma na-arụ ọrụ nke mgbanwe nke estrogen.
5.Anti-inflammatory na antimicrobial utịp- Resveratrol nwere mmetụta mgbochi na Staphylococcus aureus, catacoccus, Escherichia coli na Pseudomonas aeruginosa. Ihe omumu omumu ihe omumu egosiputara na resveratrol nwere ike nweta ogwugwo site na ibelata platelet adhesion ma gbanwee oru platelet n'oge usoro mgbochi mkpali.
Companylọ ọrụ anyị etinyela aka na resveratrol mmịpụta ihe karịrị afọ 20, nwere akụ na ụba nke mmepụta, nyocha na ahụmịhe mmepe. Resveratrol nwere ezigbo ihe oriri na-edozi ahụ ndị mmadụ dị iche iche na-echegbu ebe niile. Dabere na atụmatụ ahịa, enwere ike iji resveratrol mee ihe dị ka mgbakwunye dị ike, ọkachasị maka ọrịa ndị akọwapụtara. Ihe mgbakwunye nri bụ otu n'ime ebe a na-ejikarị resveratrol eme ihe, ụlọ ọrụ na-averageụ ihe ọverageụverageụ na-anabatakwu ụlọ ọrụ nri na nri ọhụrụ na ngwaahịa na ihe ọverageụverageụ, ọkachasị ike ọ drinksụ drinksụ. Na mgbakwunye, mmasị ndị ahịa maka ngwaahịa okike ga-emekwa ka ojiji nke resveratrol gbasasịa na mgbakwunye.
Dabere na ọnụ ọgụgụ ezughị ezu, oriri ụwa nke resveratrol mụbara site na nkezi uto nke 5.59%. Kemgbe afọ 2015, United States nwetara pasent 76.3 nke ngwaahịa ọhụrụ a na-akpọ resveratrol, ebe Europe ritere naanị 15.1 percent. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwaahịa na-edozi ahụ resveratrol sitere na United States. Ọchịchọ maka resveratrol na-arịwanye elu n'ihi ọchịchọ ka ukwuu maka ngwaahịa ndị dị ala.
N'ikwekọ na echiche nke ịbụ ndị na-ahụ maka ọha mmadụ, ụlọ ọrụ na ndị ọrụ, Uniwell biotechnology etinyego nnukwu mkpa na njikwa usoro mmepụta yana nyocha nke ngwaahịa a. Site akụrụngwa ị nweta, mmepụta, nkwakọ, ahịa na mgbe-sales ọrụ, anyị na-nditịm soro GMP chọrọ maka management.We nwere a ike mma obi ike otu, elu nnyocha akụrụngwa (HPLC, GC, wdg) na akụrụngwa, ma guzosie ike a echesinụ quality management usoro.
Anyị na-akwado ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, na-etinye aka iji wuo ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ọma, na-enye ihe okike, nke dị elu na-ewepụta ngwaahịa maka nri, ngwaahịa ahụike, ihe ịchọ mma, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.